Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhalinyaro la shaaheeyay -
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhalinyaro la shaaheeyay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si lama filaan ah ugu degtay, goob lagu shaaho oo ku taal degmada Shibis, xilli uu ka yimid mid ka mid ah Hotelada Muqdisho oo uu kaga qeyb galayay kulan dhaqaale loogu uruurinayay Abaaraha.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa gaarigii uu saarnaa ka degay, dabadeedna fadhiistay goob lagu shaaho oo ay fadhiyeen dhalinyaro, waxaana Ra’iisul Wasaaruhu muujiyay tallaabo geesinimo leh, inta uu ka degay gaadiidkii aan xabadaha karin ayuu fariistay goob lagu shaaho.
Goobta lagu shaaho ayaa waxaa fadhiyay dhalinyaro da’yar, halkaas ayuuna Ra’iisul Wasaaruhu kula sheekeystay dhalinyarada xaaladooda ka wareystay, isagoo shaaha ula cabay si qof caadi ah.
Waxan shacabkeyga u shegaya inan la wadaagi doono wax walba oo nala soo gudbonada intan kujirno halganka lagu so celinayo sharafti”ayaa yiri Ra’iisul Wasaaraha qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Mid ka mid ah dadweynihii goobta fadhiyay ayaa sheegay in tani ay ka turjumeyso in dowladdu ay tahay dowlad shacab, loona baahan yahay in mar walba shacabka iyo madaxda ay is dhex galaan.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa todobaadkii hore tagay xeebta Liido, halkaasoo ka mid goobaha ay dadweynaha u damaashaad tagaan, waxaa uu la kulmay dhalinyaro iyo dad kale oo xeebta ku sugnaa.
Xigasho: Wargeyska Jowhar
Related Items:Featured, Jubbaland, President of Somalia, Puntland, Somali News, Youth
Madaxweynaha Jubbaland iyo Danjiraha UK oo kulmay.
Wasiirkii Howlaha Guud ee Soomaaliya oo goor dhow Muqdisho Lagu Dilay